Muqdisho oo Dib u go’catay Qaraxyo iyo Dilal Qorsheysan(Warbixin kooban) |
Muqdisho oo Dib u go’catay Qaraxyo iyo Dilal Qorsheysan(Warbixin kooban)
Magaalada Muqdisho oo Bilooyinkii tagay xoogaa ka nasatay Qaraxyadi iyo dilalki qorsheysanaa ayaa xilligan waxaa muuqaneysa in ay dib u bilowdeen Qaraxyadi loo geysanayay Xaruumaha dowladda iyo dilalka qorsheysan ee lagu bar til-maamedsanyo raga u shaqa dowladda iyo kuwo xiriirka la leh kuwaasso ku sugan meelaha ay ka taliso dowladda Somaliya.
Todobaadki tagay iyo kii ka horeyaba waxaa magaalada ka dhacayay dilal qorsheysan iyo qaraxyo xooggan ,waxaana ugu danbeeyay qaraxi lagu bar-tilmamedsaday Taliyihi nabad sugidda Gobalka Banadir iyo kii Shalay galinkii danbe ka dhacay Suuqa bakaaraha ,waxaana qaraxii Shalay uu ahaa mid lagula beegsaday Saldhig ay deganaayeen Ciidamada dowladda oo ku yaala dhanka woqoyei ee Suuqa bakaaraha.
Waxaa sidoo kale jirtay dilal loogeystay Ciidamo ka tirsan kuwo dowladda kuwaasoo iyagana si qorshysan loo dilay Waxaana Ciidamada la dilay ka mid ahaa Saraakiil Ciidan,inkastoo ay Ciidamada dowladda marki uu dil dhaca ay baaritaano sameeyaan,waxaana intabadan ay soo qab-qabataan dhalinyaro aan raad ku laheyn waxii dhacay.
Dad ka hadda ku nool Muqdisho ayaa waxaa ay muujinayaan Cabsi xooggan oo ku aadan dhanka amaanka ,waxaana qof walba oo aad aragto uu kuu sheegayaa in dilalki qorsheysnaa ee Muqdisho looga bartay ay dib u bilowdeen.
Aringtan ayaa waxaa laf dhuungashay ku noqoneysaa Siyaasadda dowladda ,maadama ay Saraakiisha dowladda ay warbaahinta u sheegaana marwalba in Muqdisho ay amaantahay taasoo keentay in dad badan ay Magaalada dib ugu soo laabtaan.